SJ Technology, Hydraulic akara valves, Gear nfuli, Hydraulic ike unit-Huaian Shengjie Hydraulic Machinery Co., Ltd
Mmadụ Bịa ka SJ-ỌREC
Ahịa afọ ojuju bụ ihe mgbaru ọsọ anyị kachasị na Sheng Jie.
Huaian Shengjie Hydraulic Machinery Co., Ltd., nke e guzobere na 1990, bụ ọkachamara na-arụ ọrụ ntugharị ntụziaka na China. Anyị pụrụ iche na-amị directional eruba akara valvụ, directional akara haịdrọlik valvụ, multiple akara spool valvụ, elu nsogbu multi-mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri valvụ na wdg Anyị na ngwaahịa ndị na-na pụtara ìhè arụmọrụ, adaba ọrụ, na anyị na ngwaahịa na-n'ọtụtụ ebe etinyere ugbo, ewu, mmanụ ala , azụ azụ, na Ngwuputa ...
Monoblock Ntuziaka Ntuziaka
Ngalaba Ntuziaka Ntuziaka Nkebi
16ml / r-80ml / r Mwepụ Hydraulic Gear nfuli
pallet ụgbọala ike unit
Pallet gwongworo Power Unit2
Ebuli Isiokwu Ike Unit6
Ihe omuma nke SJ na ihe omumu nke 30 kariri eme ka oru anyi na ntinye aka ya na itinye aka na ntughari nke oma na mgbanwe nke oma site na ngwa ahia ndi oma na ndi mmadu. Anyị na-enye mbadamba na ngwaahịa dị iche iche nke ngwaahịa hydraulic nke a na-ahụkarị maka ya maka ngwa ọ bụla. N'oge anyị na-emepe emepe, anyị na-ege ntị nke ọma ma na-elekwasị anya na ihe ndị ahịa anyị chọrọ, na-enye nkwukọrịta na-agbanwe agbanwe iji tinye ọrụ anyị na teknụzụ maka uru nke ndị ahịa anyị na ndị mmekọ ahịa.
Ihe omuma, ike, nlezianya anya na ụkpụrụ omume bu ogidi nke ulo oru di njikere ikwado na nke oma n’ahia. SJ Technology ga-elekwasị anya na mmepe hydrogen na-arụ ọrụ ma melite ngwaahịa anyị. Anyị mbupụ Europe, Middle East mba, Asia, Australia, New Zealand, South America na North America, wdg Na anyị na ngwaahịa nweta aha ọma na China na esenidụt. Nabata ileta anyị ma bụrụ onye anyị na ya ga-eme.
Ọrụ dị elu na ọrụ dị iche iche
Ngwa oru ugbo site na udi igwe obula ejiri rụọ ugbo ma obu na ala.
Nnukwu ọnụọgụ anyị dị elu 240LPM, 400LPM na ndị na-agagharị agagharị na-arụ ọrụ zuru oke na Marin.
Ugbo ala oru ugbo
Anyị na-enye ụzọ nchịkwa dị iche iche monoblock anyị na valvụ nke ngalaba anyị maka ụgbọ ala ndị ọrụ mmepụta ihe.
Mwube na Ngwuputa Euq Equipment
Mpaghara anyị nke nwere mgbochi cavitation na mgbochi ujo valvụ na ngwa pụrụ iche.
Ọtụtụ afọ nke ahụmịhe azụmaahịa anyị na ngalaba igwe eji eme ọhịa enyerela anyị aka ịmepụta ngwa ngwa maka sistemụ hydraulic, akụkụ ndị ọzọ, na ngwaahịa na mpaghara nke mpaghara Russia Nord na Scandinavia.
Obere ndị na-egwupụta ihe
anyị na-chepụta obere eruba ọnụego sectional akara valves na joystick akpan maka mini excavators.
AJỤJỤ & OZI
Ị bụ ụlọ ahịa ma ọ bụ onye na-emepụta ihe?
Anyị bụ ndị factory kemgbe 1990.
Kedu ihe bụ usoro nlele gị?
Anyị nwere ike ịnye ihe nlele ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere akụkụ dị njikere na ngwaahịa, mana ndị ahịa ga-akwụ ụgwọ ihe nlele ahụ na ego onye ozi.
Na-anwale ngwongwo gị niile tupu nnyefe gị?
Ee, anyị nwere 100% ule tupu nnyefe
Olee ekwe nkwa na elu mma?
Anyị nwere ngalaba nyocha iji hụ na ogo nke ngwaahịa ọ bụla, ọdịdị na ule nrụgide dị mma.
Kedu maka oge ị na-enye?
Ohaneze, ọ ga-ewe 30 ruo ụbọchị iri anọ na anọ mgbe ị natachara ụgwọ gị. Oge nnyefe akọwapụtara na-adabere na ihe na oke nke usoro gị.
Vkù OF 2019 AGRITECNICA
2019 PTC ASIA NA-AB,, SJ Teknụzụ Na-echere Gị